A Dụọla Ndị Ụka Ka Ha Jidisie Ezi Agwa Onye Otu Kraịstị
A kpọkuola ndị ụka n'ụwa gbaa gburugburu ka ha na-ejigide akparamagwa ezi onye otu Kraịstị ma na-egosipụtakwa nke ahụ n'ebe ọbụla ha hụtara onwe ha.
Bishọpụ ụka Angịlịkan na Dayọsiisi Awka bụ Rt. Rev. Chibuzọ Ibezim (Phd) kpọrọ oku n'ụlọ ụka 'Chapel of Redemption' nke mahadum Nnamdị Azikiwe dị n'Ọka, n'ofufe nro ibikwasị aka n'isi nke weere ọnọdụ ụbọchị ụka gara aga. Ọ kọwara onye otu Kraịstị dịka onye na-egosipụta akpramagwa Kraịstị n'ebe ọbụla ọ hụtara onwe ya, na n'ihe ọbụla ọ na-eme.
N'ịgbado ụkwụ n'isi okwuchukwu ya, bụ "akparamagwa atọ dịkarịchara mkpa, nke onye otu Kraịstị"; bishọọpụ Ibezim kpọpụtasịrị akparamagwa atọ e jiri mara onye otu Kraịstị, nke gụnyere: akparamagwa ịgbasa oziọma, akparamagwa ịrụsi ọrụ ike, na akparamagwa ibi ndụ dị nsọ; ma kwuo na o kwesiri ka mmadụ ọbụla chọrọ ịba uru ma n'ụwa ma n'eluigwe ñomie ma were akparamagwa ndị a mere akụkụ obibi ndụ ha.
O gosipụtara obi añụrị ya banyere otu ọrụ si aga n'ike n'ike n'agidigba ụlọ ụka ahụ a na-arụ n'ebe ọkpụtọrọkpụ ya dị n'ime mahadum Nnamdị Azikiwe, ma kpọkuokwa onye na onye ọbụla ka ọ gaa n'ihu n'ịtụnye ụtụ nke ya n'ịgbasa oziọma, na-emeghị ihere, ọbụnadị dịka ọ rụtụrụ aka n'akwụkwọ Nsọ, ebe Kraịstị kwuru na onye ọbụla gọnahịrị ya maọbụ mere ihere n'ihi Ya n'eli ụwa, na Ya onwe Ya ga-agọnahị maọbụ meekwa ihere banyere onye ahụ n'ihu Nna Ya, dịka ọ dị n'akwụkwọ Matiu isi nke iri, amaokwu nke iri atọ na atọ.
N'ozi ekele ya, onye ụkọchukwu ụlọ ụka ahụ bụ Ven. Benson Udọzọ kelere n'ụzọ pụrụ iche, imirikiti mmadụ ndị bịara ya bụ ofufe nro, nke gụnyere onyeisi ụlọakwụkwọ mahadum Unizik, bụ Ọkammụta Eberendụ Ahaneku, nke onye nọchitere anya ya bụ Ọkammụta Godson Okafọ. Ọ dụrụ mmadụ ọbụla, ọ kachasị ndị e bikwasara aka n'isi, ka ha gaa n'ihu n'ibi ndụ dị nsọ iji wee keta oke n'alaeze eluigwe n'ụbọchị ikpeazụ.
Mmadụ ruru narị anọ n'ọnụ ọgụgụ bụ ndị e bikwasịrị aka n'isi, ebe a kpọbatara mmadụ ruru iri atọ na atọ n'otu ndị nna, tinyere imirikiti ndị nne, bụ ndị a kpọbatara n'otu gịụdụ ụmụnwaanyị, otu ụbọchị ahụ.
Ihe pụtakarịchara ihe na ya bụ ofufe nro bụ ibikwasị ndị ahụ aka n'isi kpọnkwem, na ịkpọbata ndị ahụ a kpọbatara n'otu ahụ dịgasị iche iche, bụ nke e mere site n'aka Bishọọpụ ahụ, tinyere onyinye ịtụ mma mma, nakwa abụ olu ọma dị iche iche a bụrụ site n'ọnụ ndị ọbụ abụ ụlọ ụka ahụ.